युवराज दीपेन्द्रले नै गोली चलाएका हुन् : एडीसी सुरेन्द्रप्रताप राना
सन्दर्भ : दरबार हत्याकाण्डको १९ वर्ष
कृष्णसिंह लाेथ्याल काठमाडौं, १९ जेठ
तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहसहित राजपरिवारका १० जना सदस्यको हत्या भएको दरबार हत्याकाण्ड भएको आज १९ वर्ष पूरा भएको छ । हत्या कसले र किन गर्‍यो ? त्यो अझै रहस्यकै गर्भमा छ । वीरन्द्रको वंश नै नाश हुने गरी भएको उक्त हत्याकाण्डका बेला ड्युटीमा नेपाली सेनाका पूर्वमहासेनानी राजा वीरेन्द्रका एडीसी सुन्दरप्रताप राना खटिएका थिए ।
शुक्रबार बेलुका पौने ९ बजेको थियो । महिनाको तेस्रो शुक्रबार, त्यसैले राजपरिवारको भेटघाटको कार्यक्रम थियो । राजपरिवारका सदस्यहरूको महिनाको एक दिन भेटघाट गर्ने कार्यक्रम हुन्थ्यो । उक्त भेटघाट कार्यक्रम पनि त्यसैको निरन्तरता भएको एडीसी राना बताउँछन् ।
‘त्रिभुवन सदनमा शाही परिवारको रात्रि भोज चल्दै थियो । भोजमा आउनेहरूको व्यवस्थापनमा हामी जुटेका थियौँ । युवराज दीपेन्द्र आफ्नो कोठामा सुत्नुभएको खबर थियो । राजा वीरेन्द्रसहित अन्य सदस्यको जमघट थियो’, राना थप्छन्, ‘त्यही बेला गोली चलेको जस्तो आवाज त होइन, सामान्य भाइब्रेसन आयो । गोली चल्छ भन्ने कल्पना पनि थिएन । गोली नै भए पनि युवराज दीपेन्द्रले चराहरूलाई गोली हाने कि भन्ने लाग्यो । तर, पनि सतर्क भयौँ । सरकार (राजा वीरेन्द्र) भएतिर मैले जुनियरहरूलाई के भएकाे रहेछ भनेर हेर्न पठाएँ । उनीहरूले धीरेन्द्र सरकार ढलेको खबर ल्याए । म आत्तिँदै गएँ ।’
आफू त्रिभुवन सदनमा पुग्दा कोही पनि उभिएको नदेखेको एडीसी रानाले बताए ।
कोही डरले ढलेको त कोही गोली लागेर ढलेको रानाले बताए । त्यसपछि आफू राजा वीरेन्द्र भएतिर गएको उनको भनाइ छ ।
‘राजा वीरेन्द्र नजिक पुग्दा बाहिर गोली चलेको आवाज जारी नै थियो । म एक्लै थिएँ । हाम्रो ड्युटी भनेकै भीआईपीलाई कसरी सुरक्षित ठाउँमा लैजाने भन्ने हुन्छ । चाहे भीआईपी जीवित हुन् वा घाइते । मैलै त्यही गरेँ । राजा वीरेन्द्रलाई बाहिर निकालेँ । बाहिरको टिमले गाडीको व्यवस्थापन गर्‍यो । राजालाई गाडीमा राखेर सैनिक अस्पताल छाउनी पुर्‍यायौँ’, राना भन्छन्, ‘त्यहाँसम्म पुग्दा फेरि मलाई गोली चलाउने मान्छे पछिपछि आउँदै छ कि भन्ने डर लागेको थियो । अस्पताल सिल नै गर्न लगाएँ । घटनाको ६ देखि १० मिनेटभित्र हामी अस्पताल त पुग्यौँ तर अस्पताल पुग्दा डाक्टरले राजाको श्वासप्रश्वास बन्द भएको डाक्टरले सुनाए ।’
राजालाई अस्पताल पुर्‍याएको १५ मिनेटपछि युवराज दीपेन्द्र, अधिराजकुमार निराजनलाई पनि अस्पताल पुर्‍याइएको थियो । अस्पताल पुग्दा निराजनको मृत्यु भइसकेको थियो भने दीपेन्द्र जीवितै भएको रानाले बताए ।
उक्त हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्रसहित रानी ऐश्वर्य, युवराज दीपेन्द्र, अधिराजकुमार निराजन, अधिराजकुमारी श्रुति, अधिराजकुमार धीरेन्द्र, अधिराजकुमारी शान्ति राज्यलक्ष्मी सिंह, शारदा राज्यलक्ष्मी शाह, शाहज्यादी जयन्ती राज्यलक्ष्मी शाह, कुमार खड्गविक्रम शाहलगायतको हत्या भएको थियो ।
उक्त राजदरबार हत्याकाण्ड नै गणतन्त्र स्थापनाको एउटा महत्त्वपूर्ण खुट्किलो बनेको कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरूको भनाइ छ ।
कसले चलाए गोली ?
शाही परिवारको उक्त रात्रिभोजमा कोही पनि बाहिरका मानिसको उपस्थिति थिएन । सुरक्षाको चौघेराभित्र भएको उक्त हत्या काण्डबारे आममानिसको धारणा फरकफरक छ ।
केहीले भारतको डिजाइनमा राजदरबार हत्याकाण्ड भएको आरोप लगाउँछन् भने कोही तत्कालीन युवराज पारस शाहमाथि आरोप लगाउँछन् । तर, एडीसी रानाका अनुसार गोली युवराज दीपेन्द्रले नै चलाएका थिए ।
‘उहाँ भोजको सुरुवाती अवस्थामा कोठामा सुतेकाे भए पनि पछि त्रिभुवन सदनको रेस्टुरेन्ट भएको बाटो हुँदै आएको अनुमान हाम्रो छ । अगाडि बाटोमा हाम्रो ड्युटी थियो । उहाँ अगाडिबाट आउनु भएन’, रानाले भने, ‘मेरो बुझाइमा युवराजले नै गोली चलाउनुभयो । त्यसको पछाडिको प्रमुख कारण उहाँको प्रेम नै हुन सक्छ ।’
घटनाका केही प्रत्यक्षदर्शी अझै जीवितै रहेको भन्दै उनीहरूसँगको बयान सार्वजनिक गरे सबै कुरा स्पष्ट हुने रानाले बताए । राना राजदरबारमा करिब १८ वर्ष कार्यरत थिए ।
यसो त हत्यालगत्तै सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्याय, सभामुख तारानाथ रानाभाट सम्मिलित छानबिन समितिले तत्कालीन युवराज दीपेन्द्रलाई हत्याको मुख्य योजनाकारका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो । तर, उक्त प्रतिवेदनमा आमजनताले अझैसम्म विश्वास गरेका छैनन् ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ १९, २०७७, १६:३८:००